गीतकार देवराज स्याङतानको नजरमा प्रेम र चोखो माया यस्तो पुरा पाठ » Grand News
गीतकार देवराज स्याङतानको नजरमा प्रेम र चोखो माया यस्तो पुरा पाठ
२ भाद्र २०७८, बुधबार २२:२१ 284 पटक हेरिएको
१. प्रेम के हो ?
प्रेम एउटा फुल हो, जस्लाई फुल्न दिनुपर्छ । प्रेम एउटा अन्तरात्माको भावना हो, जस्लाई बुझ्नुपर्दछ । प्रेम एउटा सपना हो, जस्लाई सजाउनुपर्दछ । प्रेम एउटा शक्ती हो, जस्ले एउटा अन्धो मान्छेलाई पनि सुनौलो संसार देखाउछ । प्रेम एउटा खुसीको त्यो पल हो, जस्ले हजारौ दुख र पिडाका पलहरू भुलाउन बिवस गराउछ । अर्थात प्रेम नै दुई मनमुटूको मिलन हो, जस्लाई मिलाउनुपर्दछ ।।। यसरी नै प्रेमका बिभिन्न परिभाषाहरू दिईएका पाईन्छन तर जतीसुकै परिभाषाले पनि प्रेमको अर्थ पुर्ण भएको छैन । किनकी प्रेम गन्तव्य बिहिन छ अर्थात कति प्रेम गर्ने भन्ने सिमा नै छैन तर तुलना गरेर जाच्न सकिन्छ, जुन भावनामा मात्र सिमित छ । हजारौ प्रेमीहरूको प्रेमको परिभाषाले पनि प्रेमको उपयुक्त परिभाषा दिलाउन सकेको छैनन् । प्रेमले एउटा बेग्लै अर्थ दिएको छ, जुन भावनाले मात्र बुझ्न सकिन्छ । प्रेम भगवानले दिएको अमुल्य उपहार हो, जस्लाई मनमा सजाएर पुजा गर्नुपर्दछ । प्रेमका यस्तै थरिथरिका परिभाषाले नै प्रेमलाई रंगिन बनाएको छ । यो भन्दा पनि यो संसारका सफल प्रेमीहरूले यसलाई नया रंग दिएका छन । यो रंगिन संसार नै प्रेममा सजिएको छ । प्रेम हरेकसँग हरेक किसीमको गासिन्छ । आफन्तसँग एउटा किसिमको हुन्छ, भने जिबनसाथीसँग अर्कै र साथीसँग अर्कै किसिमको गासिन्छ । प्रेम केवल पवित्र छ तर कसैको सोच अनुसार तिनीभित्र नै अपवित्र भएको छ । यो संसारमा यस्ता मान्छेहरू पनि छन, जुन प्रेमलाई नकारात्मक भावना र नजरले मात्र हेर्ने गरेका छन अथवा तिनिहरूलाई वास्तविक प्रेमको अर्थ नै थाहा छैन, त्यसैले अरूलाई पनि आफुजस्तै ठान्ने गरेका छन । प्रेम के हो त्यो एउटा प्रेमीलाई मात्र थाहा हुन्छ । प्रेमले एउटा खतरनाक शत्रु पनि हृदयको साथी बन्न सक्छ, अर्थात एउटा असल मित्र बन्न सक्छ । मैले एकदिन भगवानसँग एउटा प्रश्न राखे “प्रेम के हो” भनेर तर उहाँले जवाफ यस्तो दिनुभयो “पहिले कसैलाई मनदेखी नै प्रेम गरेर हेर अनि यसको जवाफ तिमी आफै पाउनेछौ” अर्थात “प्रेम गर्नु नै प्रेम हो” ।
तर मलाई अचम्म लाग्न थाल्यो कि, यो त्यस्तो के चिज रहेछ जस्को जवाफ नै छैन अर्थात जसको अर्थ नै भन्न सकिदैन ।
तर हो रहेछ, प्रेमलाई वास्तबिक अर्थ भन्दा पनि भावनाले बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ । प्रेम नै त्यो खुसी रहेछ, जस्ले आँशुको मुल्य तिर्न सक्दो रहेछ । अनगिन्ती दुख र पिडाहरू भुलाउन सक्ने अथवा मेटाउन सक्ने औषधी नै प्रेम बनेको छ ।
तपाईलाई प्रेमको अर्थ तब मिल्नेछ जब तपाईलाई केही गुमाएको महसुस हुन्छ ,धेरैजसो मान्छेहरू प्रेमको पर्खाईमा भौतारिरहेका हुन्छन भने धेरैजसो मान्छेहरूको पर्खाईमा प्रेम नै भौतारिरहेको हुन्छ,अर्थात कसैको आँसुलाई प्रेमले खुसीमा बदल्छ भने कसैको खुसीलाई प्रेमले नै आँशुमा बदलि”दिन्छ ,किनकी धेरै जसोहरू परिस्थितीलाई बुझ्न सक्दैनन् र आफ्नो खुसी मात्र खोज्न चाहन्छन तर त्यसरी खोजेको खुसी धेरै टिक्दैन र पिडामा परिणत हुन्छ ।
२. चोखो माया के हो ?
कसैको मनले कसैको सुन्दरता र आकर्षणलाई मन पराउछन भने कोही त्यसलाई पनि प्रेम भन्दछन । कोही कसैको गुनलाई पनि प्रेमको परिभाषा लगाउछन । सबैको नजरमा प्रेमको परिभाषा त धेरै नै छन । जुन अलग अलग परिभाषा भएपनि अर्थ चाही एउटै हुन्छ । यदी तपाईले पनि कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईले पनि प्रेमको आफ्नो छुट्टै परिभाषा दिन सक्छौ । तर जब कसैले कसैलाई यत्ती धेरै गहिराईमा माया गर्छ कि, उ हरपल तड्पिएर बाचेको हुन्छ तरपनि उसबाट टाढिन चाहदैन । जब उसलाई थाहा हुन्छ कि उनी एक हुन सक्दैनन् तर पनि उ उसकै प्रेममा पागलजस्तो बनिरहन्छ । हरपल हरक्षण उ केवल उसकै निम्ती बाचिरहन्छ र उसकै मायामा बगिरहन्छ, तर उ स्वार्थ भने कहिल्यै खोज्दैन अर्थात कहिल्यै एक हुन नसकेपनि जिन्दगीभर नै एक्लै जिउन समर्पण गर्दछ । अर्थात उसबाहेक अरूसँग जिन्दगी नै बिताउन चाहन्न र आफ्नो पुरै जिन्दगी नै उसकै माया र यादमा समर्पण गर्दछ भने त्यो प्रेमलाई नै चोखो प्रेम भनिन्छ । किनकी उसले केवल उसको मनसँग माया गासेको हुन्छ । नत्र उसले सुन्दरता सँग माया गासेको भए उसले त्यो भन्दा अरू नै राम्रो देखेपछि उसलाई भुल्न पनि सक्थ्यो । तर चोखो प्रेम गर्ने प्रेमीहरू आफ्नो प्रेम र प्रेमीलाई भुल्न नै चाहदैनन् । उनिहरू जति पिडा भोग्नुपरे पनि आफ्नो प्रेमका हरेक पलहरू मनमा सजाएर जिन्दगीभर सम्हाल्छन । उनिहरू आफ्नो प्रेम प्राप्तका लागी अरूलाई दुख दिन चाहदैनन् र बरू बिछोडिनु परेपनि र सधै तड्पिएर जिउनु परे पनि पिडालाई नै स्विकार गर्दछन । तर कोही आफ्नो प्रेम नपाएर आफुखुसी मर्न तयार हुन्छन भने त्यो चोखो प्रेम होईन र त्यो केवल स्वार्थपन र अकस्मात आएको निर्णय मात्र हो तर चोखो प्रेम गर्नेहरूले हरेक कुरा स्विकार गर्न सक्नुपर्दछ । वास्तबमा चोखो माया नै त्यो हो जुन निस्वार्थ र हरेक दुख र पिडा लाई स्विकारका लागी गरिएको हुन्छ, जसमा रत्तीभर पनि खोट हुन सक्दैन ।
देवराज स्याङ्तान ✍️✍️
गायक बिहिन दोङको अर्काल
तामाङ चलचित्र तिङला नाङ्सालले
नेपाल आइडल बुद्ध लामाको
पत्रकार सम्मेलनमै दर्शक रुवाए
गणतंत्र स्थापनामा नेकपा माओवादी
जे बि जिम्बाको हेरइ
गायक बिहिन दोङको अर्काल लसी आपिन मायाको छायांकन सम्पन्न
तामाङ चलचित्र तिङला नाङ्सालले दर्शक रुवायो,अब्बल साबित निर्देशक निमा लामा
नेपाल आइडल बुद्ध लामाको चंन्चली बजारमा सोमबार आउने
पत्रकार सम्मेलनमै दर्शक रुवाए मायाला कसमले
गणतंत्र स्थापनामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष (प्रचण्ड)को योगदान महत्वपूर्ण रहेको: मौलाना मशहूद
जे बि जिम्बाको हेरइ बबाल बबालले बजारमा धुम मच्चाउदै
सुशिल लामाको रेकर्डिङको क्रममै चर्चको शिखरमा लाखौ छामे बोलको गीत
चन्द्रौटामा कोभिडको जोखिम रहदा पनि अधिकांश माक्स लगाउदैन